Famolavolana sarin'ny dobo filomanosana
Nahoana no manao sary dobo filomanosana
Ny fitsipiky ny famolavolana dobo filomanosana dia tena ilaina amin'ny fanamboarana dobo filomanosana, ary azo lazaina ho tena ilaina mihitsy aza.
Amin'ny ankapobeny, ny mpanao mari-trano, ny mpiantoka ankapobeny na ny mpanamboatra dobo dia manome drafitra dobo masiaka ho an'ny mpanjifany. Noho izany, ny fanamboarana ny dobo filomanosana dia tsy afaka manao afa-tsy ny mpandraharaha ankapobeny. Amin'izany fomba izany, tsy afaka manana safidy be loatra ianao amin'ny resaka fomba fananganana, fitaovana ary fitaovana. Tsy maintsy mandoa ny teti-bolan'ny fanamboarana dobo amin'ny vidin'ny mpiantoka ianao.
Na izany aza, ao amin'ny GREATPOOL dia azonao atao ny mifehy ny teti-bolan'ny tetikasa dobo amin'ny alàlan'ny sary ataonay ho anao. Mazava ho azy fa mila mandany fotoana hifandraisana ianao, saingy afaka manome toky anao izahay fa mendrika izany.
Tohizo ny famakiana dia hazavainay aminao ny fomba handraisanao anjara sy ny zavatra azonao avy amin'izany.
Voalohany, hanome anao andian-tsary feno ho an'ny fanatanterahana ny tetikasa izahay. Manahy ianao sao tsy mahazo ny sarintsika. Mora azo ny famolavolana azy ireo, na dia ho an'ireo vao manomboka manorina dobo filomanosana aza.
Faharoa, manome lisitra feno ihany koa ny fitaovana fanivanana hapetraka amin'ny dobo filomanosana sy efitrano paompy.
Fahatelo, ny fanorenana manontolo sy ny fametrahana fanohanana ara-teknika. Matahotra ny tsy fahampian'ny fahaizana manamboatra dobo filomanosana ianao. Raha ilaina dia hiaraka aminao mandritra ny asa izahay hanome anao fanohanana ara-teknika.
Raha fintinina, rehefa mandray anjara amin'ny tetikasa famolavolana GREATPOOL ianao dia ho azonao ny fomba fiasan'ny dobo filomanosanao; ny diagram hydraulic dia mampiseho mazava tsara ny toerana misy ny fantsona, ary voatonona ny valves sy ny fitaovana rehetra ao amin'ny efitrano paompy
Misy sary misy dobo filomanosana
Ny toe-javatra misy ny tetikasanao: Hasehonay anao ny toerana tena misy ny dobo filomanosana mifototra amin'ny sarintany topografika.
Ny famolavolana ny dobo filomanosana
Noho ity sary ity dia ho vitanao tsara ny manao ny structural engineering. Tondroy ny soatoavina refesina rehetra mba hisorohana ny fahadisoana. Ity fizarana ity dia mampiseho mazava ny halalin'ny rano sy ny tohatra mankany amin'ny dobo filomanosana.
Voamarika ny famolavolana ny lakandrano sy ny tatatra; mazàna, hametaka fanazavana amin'ny antsipiriany izahay mba ho azon'ny mpiasa tsara kokoa.
Ny traikefantsika dia mampiseho fa ny fampiasana loko dia mahatonga ny sary ho mora vakina kokoa; Marina indrindra izany ho an'ny dobo infinity.
Raha fintinina, ny antsipiriany rehetra dia tena ilaina amin'ny fanatanterahana ny sarin'ny dobo filomanosanao.
Avy amin'ny dobo mankany amin'ny efitranon'ny fitaovana
Tamin'ny drafitra ankapoben'ny dobo, dia nalainay ny fisehon'ny fantsona samihafa mampifandray ny kojakoja dobo sy ny efitranon'ny fitaovana.
Ho fanamorana ny fahatakarana dia nampiasa loko samihafa izahay ary nanamarika tsara ny toerana misy ny fitaovana tsirairay; tsy misy atahorana ny fahadisoana.
Mba hanamora ny asan'ny plumbers, dia nandamina ara-drariny ny fantsona rehetra miala ny dobo filomanosana.
Farany, ity fisehon'ny fantsona ity dia afaka mampahafantatra anao ny toerana misy ny fantsona tsirairay; mety hahasoa izany indray andro any.
Ao am-pon'ny filtration
Ny efitranon'ny fitaovana indraindray dia tsy hitan'ny matihanina dobo satria tsy hita maso; na izany aza, io no fototry ny fametrahanao. Noho izany, ny rano dobonao dia ho madio sy voakarakara tsara. Ao amin'ny dobo infinity dia tsy maintsy apetraka ny fitaovana fiarovana.
Ny sary fametrahana natao araka ny haben'ny efitrano dia mampiseho ny fantsona rehetra, ny valves ilaina ary ny fitaovana ao amin'ny efitrano paompy. Ny valva ilaina dia omena ary voamarika mazava ny toerana misy azy. Tsy maintsy manaraka ny drafitra ihany ny mpanao fantson-drano.
Amin'ny maha tompon'ny dobo filomanosana, ity drafitra ity dia ahafahanao mitantana tsara ny rafitra filtration.
Dingana amin'ny fanatanterahana ny drafitra dobo filomanosana
Ifanakalozy hevitra indray mandeha, ary avy eo mandefa antontan-taratasy, toy ny drafitra drafitra, sary momba ny tontolo iainana, ary ny fijerena dobo filomanosana ho avy.
2. Fanatanterahana ny drafitra foto-kevitra
Handinika ny fanirianao sy ny nofinofinao izahay mba hahatanteraka ny zava-misy mety amin'ny taninao sy ny tontolo iainany. Ity drafitra foto-kevitra ity no fiaingana ho an'ny sary rehetra, ary handany fotoana rehetra hiresaka momba izany miaraka aminao izahay.
3. Ny sary
Hahazo ianao, amin'ny endrika PDF nomerika, ny sarin'ny dobo swimmimg rehetra ahafahanao manangana na manamboatra ny dobonao miaraka amin'ny fiadanan-tsaina tanteraka. Manampy fitaovana filtration be dia be koa izahay (kojakoja hofehezina, fitaovana, ...)
4. Taorian'ny sary dobo filomanosana
Raha tianao dia hanome endrika fanohanana samihafa izahay. Afaka mianatra momba ireo tolotra ireo ianao ato.
FAQ momba ny sary dobo filomanosana
Aiza no iasanao?
Miasa an-tserasera izahay ary tsy mila mandeha mba hanampy anao. Noho izany dia miasa maneran-tany izahay.
Nahoana no mitady ny fanampian'ny Great dobo?
Mizara ny fahaizanay amin'ny mpanjifanay izahay, miaraka amin'ireo fitaovana sy teknolojia avo lenta indrindra amin'ny indostrian'ny dobo filomanosana. Ity no traikefanay 25 taona amin'ny indostrian'ny dobo filomanosana. Ho fanampin'izany, ny famolavolana programa atolotray dia afaka mahatonga ny mpiasa manerana izao tontolo izao hahatakatra sy hampihatra mivantana azy io. Mino izahay fa hankasitraka ny vahaolanay ianao.
Afaka mangataka teny nalaina miaraka amin'ny sarinao ve aho?
Mazava ho azy ! Ny tanjonay dia ny hiandraikitra ny tetikasa dobo filomanosanao. Miaraka amin'ny sarintsika sy ny habetsahan'ny fitaovana, ny mason sy ny plumber rehetra dia afaka manome anao teny iray. Mazava ho azy fa manoro hevitra anao izahay hangataka teny avy amin'ny mpanao asa tanana maromaro mba hahafahanao mampitaha. Azonao atao ihany koa ny manolotra ny tenanao hividy ny fitaovana.
Manana drafitry ny mpanao mari-trano aho; inona koa no azonao entina amiko?
Ny drafitra omen'ny mpanao mari-trano dia amin'ny ankapobeny ny drafitra masonry; Indraindray izy ireo dia misy fampahalalana amin'ny antsipiriany manokana momba ny dobo tondraka, saingy kely dia kely. Ankoatra izany, ny fametrahana fantsona, fitaovana ary sivana dia tsy voalaza. Alefaso aminay ny drafitrao dia holazainay aminao ny fomba hanampiana anao.
Serivisy dobo filomanosana, Vahaolana amin'ny dobo filomanosana ho an'ny daholobe, Vahaolana amin'ny dobo filomanosana ivelany, Company Pool, Tetikasa dobo filomanosana, Dobo filomanosana Infinity Edge,